सिआस्वा सशुल्क कि निःशुल्क ?
सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका लागि प्राथमिक बजार उपयुक्त पनि हो ।
मेरो सेयरको सुविधा लिनेहरूले घर, पसल, अफिस जहाँतहीँबाट सेयर खरिदका लागि मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटर आदिबाट आवेदन दिन सक्छन् भने आफ्नो सेयरको सम्पूर्ण जानकारी पनि लिन सक्छन् । मोबाइलबाट पनि आवेदन दिन सकिने भएकाले यसबाट समयको बचत हुने हुनाले लगानीकर्ताहरूको बढी नै आकर्षण हुने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय सिआस्वाको शुल्कको विषयमा विभिन्न चर्चा हुने गरेका छन्, लगानीकर्ताहरूमाझ । विभिन्न कम्पनीले निष्कासन गर्ने, जारी गर्ने आइपिओ एफपिओ हकपद सेयर खरिदमा पछिल्लो समया सिआस्वा र मेरो सेयरमार्फत अनलाइनबाट सेयर खरिद आवेदन दिने व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । अनलाइनबाट आवेदन दिनका लागि मेरो सेयरमा आफ्नो खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ भने सिआस्वाबाट सेयर खरिद आवेदन दिँदा सिआस्वाका अनुमति लिएका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमार्फत आवेदन दिन सकिन्छ । यसका लागि सिआस्वाको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा आफ्नो खाता खोल्नुपर्छ र सिआरएन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो खाता भएका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूबाट सेयर खरिद आवेदन दिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू धमाधम बढिरहेका छन् । साथै, पछिल्लो समयमा दोस्रो बजार खस्किँदो अवस्थामा छ, तर पनि प्राथमिक बजारमा भने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक सेयर जारी हुँदा लगानीकर्ताहरू झुम्मिने गरेको देखिन्छ । यस्तै, सबैभन्दा पछिल्लो समयमा जारी भएको त्रिशूलि जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा डेढ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएका थिए । खास गरी दोस्रो बजारमा भन्दा प्राथमिक बजारमा जोखिम कम हुने भएकाले र दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नका लागि प्राथमिक बजारबाट अनुभव लिई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न राम्रो हुने भएकाले पनि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरूको बढी आकर्षण रहेको छ । सेयर बजारका विश्लेषकहरूको भनाइमा पनि प्राथमिक बजारमा प्रवेश गर्नका लागि कम मात्र रकम भए पुग्ने र जोखिम पनि कम हुने हुन्छ । त्यसै भएकाले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका लागि प्राथमिक बजार उपयुक्त पनि हो । सायद यही कारणले पनि होला, प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरूको बढी आकर्षण रहेको ।
हाल सिआस्वा र मेरो सेयरबाट सेयर खरिदमा आवेदन दिँदा सजिलो र समयको पनि बचत हुने भएकाले यसले पनि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण पहिलाभन्दा बढिरहेकोे भन्न सकिन्छ, तर पनि सिआस्वाबाट सेयर खरिदको आवेदन दिँदा सिआस्वाको शुल्कमा भने लगानीकर्ताहरूको गुनासो रहेको देखिन्छ । सिआस्वाबाट सेयर खरिदको आवेदन दिँदा कतिपय वाणिज्य बंैकले बढी शुल्क लिने गरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ । त्यसो त कतिपय बैंक तथा वित्त कम्पनीले निःशुल्क सेवा पनि दिइरहेका छन् । यस्तै, कतिपय वाणिज्य बैंकले सिआस्वा शुल्क भनेर प्रतिफारम रु. १ सय लिने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । त्यसो त शुल्क लिनेमा पनि एकरूपता नभएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ । लगानीकर्ताहरूका अनुसार कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले प्रति फारम १ सय रुपैयाँ लिने गरिरहेका छन् भने कतिपय वाणिज्य बैंकले एक रुपैयाँमात्र सिआस्वाको सेवा–शुल्क लिने गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूको जानकारीका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा एभरेस्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् भने प्रभु बैंकले एक रुपैयाँमात्र लिने गरेका छन् । त्यसैगरी सेन्चुरी बैंक र नेपाल बैंकले २५ रुपैयाँ, जनता बैंकले १० रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ३० रुपैयाँ लिने गरेका छन्, तर कतिपय बैंकले भने निःशुल्क आस्वाको सेवा दिइरहेका छन् । त्यसो त अहिलेको जमाना भनेको प्रतिस्पर्धाको जमाना हो । तर, बैंकहरू पनि आआफ्नो नियममा बाँधिएका पनि हुन सक्छन् । नियमित प्राथमिक सेयरका आवेदकहरूले लगानीकर्ताहरूले निःशुल्क सिआस्वाको सेवा दिइरहेका बैंकहरूमा खाता खोली त्यहीँबाट प्राथमिक सेयर खरिदको आवेदन दिनु बेस हुने देखिन्छ ।
सिआस्वाको सेवा दिने अनुमति लिएका बैंकहरूले सिआस्वाका सेवा–सुविधाहरू दिँदा शुल्क लिन पाउने सकिने व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिदसम्बन्धी धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन निर्देशिका, २०७३ मा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले सिआस्वाको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएबापत ५० हजार रुपैयाँसम्मको प्रतिफारम आवेदनमा १ सय रुपैयाँ र सोभन्दा माथिकोमा अधिकतम २ सय ५० रुपैयाँसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसकारणले पनि कतिपय वाणिज्य बैंकले लिने गरेको शुल्क जायज नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । शुल्क लिने गरिरहेका बैंकहरूले नियमअनुसार नै शुल्क लिने गरेका हुन्, तर पनि प्रतिस्पर्धाको बजारमा ग्राहकलाई कम शुल्कमा जति धेरै सुविधा उपलब्ध गराउन सक्यो, त्यति नै धेरै ग्राहकलाई सेवा दिने अवसर प्राप्त हुन्छ र ग्राहक बढ्ने पनि हुन्छ ।
साथै, अहिले अनलाइनबाट पनि सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । अनलाइनबाट आवेदन दिनेहरूले आफूले डिम्याट खाता खोलेको क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीबाट मेरो सेयरको खाता खोल्नुपर्छ । मेरो सेयरको खाता खोल्नका लागि इमेल ठेगाना आवश्यक पर्छ । साथै, मेरो सेयरको खाता खोल्नका लागि ५० रुपैया शुल्क तिर्नुपर्छ भने वर्षको ५० रुपैयाँ नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो सेयरको सुविधा लिनेहरूले घर, पसल, अफिस जहाँतहीँबाट सेयर खरिदका लागि मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटर आदिबाट आवेदन दिन सक्छन् भने आफ्नो सेयरको सम्पूर्ण जानकारी पनि लिन सक्छन् । मोबाइलबाट पनि आवेदन दिन सकिने भएकाले यसबाट समयको बचत हुने हुनाले लगानीकर्ताहरूको बढी नै आकर्षण हुने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।
अनलाइन वा सिआस्वाबाट पछिल्लो समयमा सेयर खरिद आवेदन दिनका लागि सजिलो भएको छ । विगतमा प्राथमिक सेयर, हकपद सेयर होस् वा एफपिओ होस्, सेयरको आवेदन दिनका लागि नगद चेक बोकी सेयर निष्कासन कम्पनीका सेयर आवेदन संकलन केन्द्रहरूमा घाम–पानी नभनी दिनभर लाइन बस्नुपथ्र्यो । तर, पछिल्लो समयमा भने यस्तो अवस्था हटिसकेको छ । यसको कारणले पनि होला, पछिल्लो समयमा प्राथमिक सेयर खरिदमा लगानीकर्ताहरू बढिरहेका छन् । हाल प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरूको आकर्षणले गर्दा नै कतिपय कम्पनीको प्राथमिक सेयर खरिदमा ३ लाखभन्दा बढीको संख्यामा आवेदन परेको पनि देखिन्छ । त्यसो त सिआस्वा लागू भएदेखि प्राथमिक सेयरको बाँडफाँड पनि छिटो हुने भएको छ । विगतमा महिनौं लाग्ने गरेको सेयर बाँडफाँड प्रक्रिया सिआस्वाले गर्दा एक हप्तामै हुने भएको छ, जसले गर्दा विगतमा जस्तो लगानीकर्ताहरूको लगानी महिनौंसम्म ब्लक हुने समस्याबाट पनि मुक्त भएको छ ।
साहित्यमा बीपीको योगदान अतुलनीय
ओझेलमा विद्युत् वितरणको सवाल
कर सुधारको भावी दिशा